Haddii Ronaldo Kusoo Laabanayo Real Madrid, Haddii Varane Tegayo, Heshiiska Ramos Iyo Zinedine Zidane Oo Bixiyey Jawaabo Xaasaasi Ah - GOOL24.NET
Haddii Ronaldo Kusoo Laabanayo Real Madrid, Haddii Varane Tegayo, Heshiiska Ramos Iyo Zinedine Zidane Oo Bixiyey Jawaabo Xaasaasi Ah
Zinedine Zidane ayaa hor-fadhiistay warbaahinta Spain ka hor kulanka Real Madrid ay la ciyaari doonto kooxda Elche maalinta Sabtida, taas oo ay ka doonayso guul si ay lix shan dhibcood uga dhigto farqiga dhibcaha ay Atletico Madrid ka horreyso, sidoo kalena ay usoo qabato Barcelona.
Tababaraha reer France ayaa ka jawaabay su’aalo xaasaasi ah oo ay ugu horreyso haddii uu kooxda kusoo laaban doono xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo oo la sheegayo in Juventus ay go’aansatay inay iibiso xagaaga kaddib niyad-jabkooda Champions League ee sii socda.
Waxa kale oo uu ka hadlay mustaqbalka Sergio Ramos oo heshiiskiisu ku egyahay dhamaadka bisha June ee sannadkan iyo sidoo kale Raphael Varane oo warbaahinta Spain sheegtay inuu dalbaday in la iibiyo xagaaga xilli qandaraaskiisa sannad kali ahi ka hadhsan yahay.
Zinedine Zidane oo ugu horreyn ka jawaabayay haddii Real Madrid ay dib ula soo saxeexan doonto Ronaldo, waxa uu yidhi: “Hagaag, waad qiimaha uu Cristiano Ronaldo ku leeyahay Madrid, waxa uu usoo qabtay, jacaylka aanu dhamaantayo u hayno isaga iyo inuu wax weyn ka qabtay halkan.
“Laakiin hadda waa ciyaartoy Juventus ah, wax fiicanna halkaa ka samaynaya. Waxba idiinkama sheegi karayo, waxyaabo badan ayaa laga yidhi laakiin waa inaad arrimahan ixtiraamtaan.”
Sergio Ramos ayay wali hadal-hayn ka taagan tahay mustaqbalkiisa Real Madrid iyadoo heshiiskiisuna ku egyahay dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin Zidane waxa uu rumaysan yahay in wax walba si fiican ku dhamaan doonaan, waxaanu yidhi: “Waxa jira dareen wanaagsan, isaga ayaana sheegay.
“Sannad walba isaga ayaa arki doona waxa uu dareemayo, waxaanu ku sugnaanayaa sida uu hadda yahay, waxaanu ciyaari kari doonaa illaa inta ay da’diisu noqonayso 40 jir. Waxa ugu muhiimsanna waa sida uu dareemayo.”
Raphael Varane ayaa ah laacib kale oo madax xanuun ku haya Los Merengues ka hor inta aan la gaadhin xagaaga, waxaana uu diiddan yahay inuu kordhiyo heshiiskiisa oo ku eg June 2022.
Maalmahan ugu dambeeyey ayay soo baxayeen warar sheegaya inuu dalbaday in la iibiyo xagaaga soo socda, balse Zidane oo ka hadlay ayaa niyad-samaan muujiyey.
“Ilama aha inuu ku fikirayo inuu ka tago kooxda. Isaga ayaa mar walba sidan sheega, aadna wuu ugu faraxsan yahay halkan.” Ayuu yidhi Zidane oo intaa raaciyey: “Waxaan arkayaa inuu halkan joogayo.”